Vamwe Vomira naVaKasukuwere kuMashonaland West
Kubvumbi 17, 2017
Kusawirirana kuri muZanu PF kwabuda zvakare mudunhu reMashonaland West uko dzimwe dzinoti dziri kuti hachisi chokwadi kuti vakatora danho rekuti mukokeri wemisangano mubato, VaSaviour Kasukuwere, vamiswe basa.
Vachitaura neMuvhuro zvichitevera mashoko ekuti dunhu reMashonaland West pamwe nemamwe matunhu mashanu anoti Harare, Midlands, Masvingo, Bulawayo pamwe neMashonaland Central akatora danho rekuti VaKasukuwere vambomiswa basa mubato nekuti vari kutadza kufambisa basa ravo nemazvo, mutevedzeri wasachigaro muMashonaland West, VaKieth Guzah, vanoti danho richatorwa nemusiwe Chitatu apo pachaitwa musangano wedunhu.
Vachipindura mubvunzo wekuti ainge ari manyepo here ekuti vakaita musangano, VaGuzah vadzambadzamba vakati havana kusununguka kupindura asi kungoti vanoda kuziva chokwadi vauye kuzozvinzwirwa vega nemusiweChitatu kubva kuna sachigaro.
Asi mashoko ari kubuda anoratidza kuti hapana musangano wakagarwa neSvondo kana rimwe zuva wakakabuda nechisungo chakadaro sezvo nhengo dzepamusoro dzataura neStudio7 dzaramba kuti hapana musangano wakaitwa kunze kwekuti pane gwaro renyunyuto iro vakasaina.
Nhengo idzi, idzo dzaramba kudomwa nemazita dzinoti dunhu ravo richaita musangano neChitatu apo pachaitwa zvisungo zvakawanda kwete chisungo chimwe chete sezviri kufungidzirwa.
Zvinonzi pane nhengo dzinosvika makumi matatu nesere kubva munhengo makumi mashanu dzakawirirana nepfungwa yekuti VaKasukuwere vambomiswa basa.
Asi imwe nhengo yedunhu inoti hazvisi pamutemo kuti VaKasukuwere vamiswe basa neboka (structure) repasi sezvo vari nhengo yebazi guru rePolitiburo neCentral Committee.
Nhengo iyi inoti bato reZanu PF rikabvumira kuti VaKasukuwere vadzingwe mumusangano nevanhu vari pasi, ibviro bviro dzakaipa sezvo zvinoita kuti vanhu vamwe chete vazofuma mumwe musi vachiti havachada mutungamiri webato, VaRobert Mugabe.
VaKasukuwere vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi ndokubva vaseka zvavo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna sachigaro weZanu PF kuMashonaland West.
Zvinonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reZanu PF kubva mugore ra2014 apo dzimwe nhengo dzinosanganisira vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, VaDydmus Mutasa naVa Rugare Gumbo nemasachigaro ematunhu, vakadzingwa mubato.
Kudzingana uku kwakaenderera mberi mwedzi wapera apo nhengo dzemadzimai dzinosanganisira mutevedzeri wasachigaro wemadzimai, Amai Sandi-Moyo, pamwe nemubati wehomwe yemadzimai, Amai Sarah Mahoka, vakabviswa pazvigaro vachipomerwa mhoswa yehuori nekuda kubvisa Amai Grace Mugabe pachigaro chavo.
Kurwisana kuri kuitika muZanu PF kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekuti ndiyani achatora chigaro chaVaMugabe kana vabva pamasimba.
Izvi zvakonzera kuti pave nezvikwata zviviri zviri kurwira masimba, che Team Lacoste, neche Generation 40.
Vanoziva zviri kuitika muZanu PF vanoti Team Lacoste iri kutsigira mumwe wevatevedzeri vemutungamiri venyika, VaEmmerson Mnangagwa, ukowo G40 ichinzi ine vanhu vanosanganisira Amai Mugabe, VaKasukuwere mbune, VaJonathan Moyo nevamwe.
Asi hapana kujeka kuti ndiyani chaizvo ari kutungamira G40, izvo zviri kuita kuti chikwata ichi chibvumburudzwe pari zvino ne Teamn Lacoste.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kushaya mutungamiri wechikwata che G40 kuri kuitawo kuti nhengo dziri kutungamira chikwata ichi dziite zvechibhubhubhu, kungorova bhora zvisina musoro.